Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPiotr&Aleksandra
Ndiyakumema kwivilla yethu eJasienica. Sinikezela wonke umgangatho ongaphezulu ngomnyango owahlukileyo, ongahlalisa ukuya kuthi ga kwi-10 abantu. Ixhotyiswe kakuhle ukulungiselela ukutya nokuphumla. Kananjalo ujikeleze iVilla kukho igadi enkulu, enebarbecue egqunyiweyo, igazebo, intenetya yetafile kunye nebala lokudlala. Yindawo yasemaphandleni, kukho iindlela zabakhenkethi, zokutyibiliza kunye neebhayisekile. Siyavuya ukukunika iingcebiso. Siza kukulungiselela isidlo sakusasa, ngokweminqweno. Wamkelekile!
IVilla Aga ikumgama oziikhilomitha ezingama-38 ukusuka eKrakow kwilali entle yaseJasienica. Iibhayisekile ziyafumaneka, onokuthi ufumane ngazo, 12km kude neVilla, eDobczyckie Lake. Ngexesha lasebusika fika apha ukutyibiliza. Intwasahlobo, ihlobo, ukuhamba kwekwindla kwiindawo ezintle zabakhenkethi. Ipropathi ijikelezwe yigadi enebarbecue egqunyiweyo, i-gazebos kunye nebala lebhola kunye netrampoline.
I-villa entle ehonjiswe ngesitayile se-rustic ibonelela ngeemeko ezintle zokuphumla. Inamagumbi ama-4 (amagumbi amabini okulala, amagumbi ama-2 anekhitshi). Ngaloo ndlela inika iibhedi ezili-10.
Izixhobo ezigcwele ikhitshi - i-oveni, i-microwave, umenzi wekofu, iketile yombane, i-dishwasher, izitya. Igumbi lokuhlambela linomatshini wokuhlamba, i-tumble dryer kunye ne-dryer, ishawa. Kuyenzeka ukuba uze nezilwanyana zasekhaya , nceda wazise kwangaphambili - iintlawulo ezongezelelweyo zinokusebenza .
Ibhedi enkulu eyi-1, 2 iibhedi ezilala abantu ababini
4.90 ·Izimvo eziyi-62
4.90 · Izimvo eziyi-62
Ububodwa bale ndawo kukudibana nendalo kwindawo yaseJasienica.
Umbuki zindwendwe ngu- Piotr&Aleksandra
Izimvo eziyi-1 457
Qhagamshelana nabasebenzi bethu alinamda.